दही मा केक - नुस्खा
केफिरको सहयोगले तपाईं बिना खमीरको पफ पेस्ट्री घुँडा लिन सक्नुहुन्छ। पफ पेस्ट्री्री केक नेपोलियन केक को लागि उपयुक्त छ, केकहरु संग खट्टा क्रीम या फल क्रीम संग। मल्टीवार्क वा ओवनमा केफिरमा केक बनाउनुहोस्।
दही मा केक "नेपोलियन"
उच्चतम ग्रेडको गहुँको आटा - 500 जी;
मक्खन - 400 जी;
kefir - 1 ग्लास;
नमक - एक तिमाही चम्मच।
अन्डा -4टुक्राहरू;
आटा - 100 g;
पहिलो हामी केक को लागि एक केईयर परीक्षण गर्दैछौं। आटा लिफ्ट गर्नुहोस्, अण्डालाई यसमा घुमाउनुहोस्, केयरमा राख्नुहोस्। नमक जोड्नुहोस् र आटा घुमाउनुहोस्। हामी यसलाई एक कटोरामा बनाउँदछौं, सफा तौलिया वा नापिनसँग आवरण गर्दछ र फ्रिजमा आधे घण्टाको लागि राख्दछ। आटा ठुलो हुँदा, मक्खन सानो टुक्रामा काटेर यसलाई थोपा तुल्याउन दिनुहोस्। मक्खन र दुई चल्ला आटा मिलाउनुहोस्, छिटो हामी त्यसलाई घुमाउँदछौं (यसलाई नरम पार्नुहोस्!)। एक वर्ग आकार को आटा बाहिर रोल, बीचमा हामी आटा संग आटा राख्नुभयो। लिफा लगाउनुहोस् र किनाराहरू निचोल्नुहोस्।
अर्को, आटा आयतको रूपमा घुमाईयो र आधामा राखियो। फेरि फ्रिजमा आधा घन्टाको लागी लाग्दछ। 30 मिनेट पछि, आटा बाहिर घुमाउनुहोस्, चार चोटि थप गर्नुहोस्, 20 मिनेटको लागि चिसो खडा गरौं। यो प्रक्रिया यदि चाहियो भने, हामी केहि पटक दोहोर्याउँछौं। तयार पफ पेस्ट्री धेरै समान भागहरूमा लुकेको छ, रोलिएको र पकाएको।
क्रीम बनाउन, दूध र चिनी उबलाउने। ओठमा ओवनमा सुनको रंगमा तान्नुहोस्, मा अण्डाहरू गाँस्नुहोस्, लुम्पहरू भंग नभएसम्म हलचल गर्नुहोस्। यस मिश्रणमा उबलाएको मीठो दूध र वेनिलिन डाल्नुहोस्। हामी एक ढिलो आगो राख्दछौं र लगातार निरन्तरता, एक फोडा ल्याउन। हामी ठोक्क्यौं।
हामी क्रिस्टहरू क्रीमसँग फैल्यो, प्रत्येक पक्षमा शीर्ष र पक्षहरू छिच्याउँछ र केक भिजेको बेलासम्म खडा गर्न छोड्छ। केक "नेपोलियन" तैयार छ!
केक लागि केफिरको लागि अर्को प्रकारको आटा एक बत्ती देखि बनेको आधा-बिस्कुट केक हो। यदि चाहेको भए चीनी र मक्खनको मात्रा घटाउन सकिन्छ, तर कुनै पनि अवस्थामा खट्टा क्रीमबाट हटाउन सक्दैन। यसले परीक्षण प्रकाश र नाजुक क्रीम स्वाद दिन्छ।
दही मा चकलेट केक
नरम मक्खन - 100 ग्राम;
कोकोआ आधा कप
खट्टा क्रीम - पोलस्टाना;
दूध आधा बर्तन
आटा -2चम्मचपत्ती;
चिनियाँ मक्खन र अण्डाको साथमा गाँसिएको छ। केयर र डाटो खानुहोस्। सम्वन्धित नभएसम्म हलचल। बेकिंग पाउडरको साथ आटा सिफ्ट, कोकोआ संग मिश्रण। धीरे-धीरे सुकेको मिश्रणलाई तरलमा राख्नुहोस्, ध्यानपूर्वक हलचल गर्नुहोस्। आटाले नै घनत्वको रूपमा पेनकेक्सको रूपमा हुनुपर्दछ। आटा दुई भागमा विभाजित छ, वैकल्पिक रूपमा एक मोल्ड मा खरानी र ब्राउन सम्म पकाएको।
क्रीमको लागि, नरम मक्खन र कन्डेन्डेड दूधको आधामा रमाईन्छ। यो क्रीम को पहिलो भाग हो। दोस्रो भाग निम्नानुसार तैयार गरिएको छ: ह्याण्ड अण्डा र शर्करा, दूधसँग पतित र आटा थप्नु, मिश्रणलाई उबलते बिन्दुमा ल्याउनुहोस्, प्रायः हिउँदमा। हामी क्रीम को दुवै भागहरु ठंडा र मिश्रण गर्छौं। यदि ठूलो मात्रामा मोटो छ भने, दूधले वांछित अवस्थामा पलाउँछ। यदि क्रीम बाहिर गयो भने तरल, तपाईं यसलाई उबला दूधको मोटो दूध को ढोका जोड्न सक्नुहुन्छ।
हामी क्रस्टहरू क्रीमको साथमा र टुक्रा टुक्राहरूसँग सजायौं। हाम्रो चकलेट केक तैयार छ!
एउटै केक साथ तपाईं जाम संग दही तयार र केक गर्न सक्नुहुन्छ। यस अवस्थामा, हामी एक उपयुक्त जाम, जाम या जाम संग केक smear।
केफिरमा संगमरमर केक प्राप्त गर्न कोकोआ आधा आटामा थपिएको छ। दोस्रो भाग सेतो हुन्छ। धीरे आटा को दुई रंगहरु हलचल, यसलाई आधामा विभाजित गर्नुहोस् र सबै उही दुई केकहरू पकाउनुहोस्, तर पहिले नै संगमरमरको ढाँचामा।
ओवनमा कद्दी पकाएको
बिरोधको बीउ, नट र किशमिशसँग तीन-तहको केक
जाम संग ग्रिड छोटो केक
चकलेट fondue घर मा
खट्टा क्रीम कन्डेन्डेड दूधको साथ
कस्टर्ड मा दूध - विभिन्न केकहरु को लागि प्रजनन को लागि उत्तम व्यंजनहरु
केक बिना बेकिंग बिना केक - घर निर्मित डेसर्ट को सबै भन्दा तेज र सरल संस्करण
मीठो र हार्दिक पाई, ब्यालेट र कुकीजको सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु - केफिर मा बेकिंग
तिलको बीउसँग बिस्कुट
पनीर र सेब संग पाई
क्रिसमस वफाल रोल्स - नुस्खा
रातिबेरी रास्पबेरी आटा संग पटाई
केकको लागि फ्यानन्डर
पाटाहरू आफ्नै हातबाट शिल्प
ग्लास भान्सा तालिका
प्रोवेंसको शैलीमा सजावट
नाइट को पैलेस
एक साधारण र स्वादिष्ट स्क्वाड सलाद - एक भोज को लागि मूल व्यञ्जनहरु र एक परिवार को खाने को लागि
बेलारुसको सबैभन्दा राम्रो सेनेटरीमेन्ट
लिना हिक्कीको बेरोजगार पूर्व-पतिले उनको कानुनी लागतको लागि $ 40,000 को आवश्यकता पर्दछ
कोका-कोलामा कति चोटि छ?
Eyelets of installer
गोलेहरूमा मसेलहरू कसरी पकाउने?
सिक्काबाट रङ कसरी बनाउने?
खाना मा भिटामिन सी
नवजातको लागि क्याप्सन
आलु क्रीममा मशरूमको साथ आलु
12 हप्तामा भ्रूणको प्यालापन
बिरालो मचिनको प्रजाति
2 दिनमा कसरी वजन गुमाउँछ?
गुर्दे को संक्रमण - कारणों, लक्षणहरु र सबै प्रकार के नेफ्रिटी को उपचार
पतिले मलाई किम कार्दाशियन ब्रालाई5मिलियन डलर प्रदान गर्यो